लामो समय प्रधानमन्त्रीले संसद छल्नुको मुख्य जिम्मेवार सभामुख
प्रदीप गिरि | २०७६ श्रावण ८ बुधबार | Wednesday, July 24, 2019 १६:४१:०० मा प्रकाशित
एकजना पूर्ववक्ताले संसदमा हिन्दीमा भन्नुभयो, विकट घडी था,सत्ता वा प्रतिपक्ष मिलकर एकै तरहका स्वर सुनाइगें। परस्पर कटाक्ष होराय हे।'
उहाँको उक्त भावनालाई म समर्थन गर्छु। संसदमा अरु कुरा पनि आएका छन्। जुन कटाक्ष आएको छ,त्यो महत्वपूर्ण छ। त्यस कटाक्षले एकातर्फ सत्तापक्ष र अर्कोतिर प्रतिपक्षको दायित्वका अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय दायित्वको संकेत गर्छ। संसदप्रति सरकार कतिको उत्तरदायित्व हुन्छ? यो कुरा सम्बन्धित संसद बाँच्ने वा नबाच्नेसँग सम्बन्ध छ। संसद र सरकारको सम्बन्ध तेश्रो विश्वमा विपरीत देखिएको छ।
भारतको संसदका बारेमा विद्धानहरूले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यपालिकाको संसद भएर गएको टिप्पणी गरेका छन्। विधायकीले महत्व पाएको छैन। मोदी दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको टिप्पणी हो।
हिन्दुस्थानका पहिलो प्रधानमन्त्री जबरलाल नेहरुको समयमा नेहरु संसदमा कति उपस्थित भए? इन्दिरा गान्धी कति उपस्थित भइन? नरसिंह राव कति दिन संसदमा उपस्थित भए? जवरलाल नेहरु मात्रै एउटा प्रधानन्त्री हुन्,जसले कहिले पनि संसदमा छल्न चाहेनन्।
भारतको संसदबारे रिपोर्ट छ। संसदमा सवाल जवाफ गर्दा उनलाई आनन्द आँउथ्यो। अहिले प्रतिपक्षले भनेको छ कि- के सरकार संसदलाई सामाना गर्न तयार छ? प्रधानमन्त्रीले आफैं संसद छल्न चाहेको होइन? बाढीका लागि जिम्मेवार गृहमन्त्री, बाढी नियन्त्रण पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। तर, वर्षा सकिएको छैन।
तटबन्धले समस्या हल गर्न सक्दैन। प्रकृतिलाई आफूले चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिँदैन। हामीले नदीसँग सह अस्तित्व गरी बस्नु परेको छ। मन्त्रीहरूले ध्यान दिनुहोला। यो प्रशासनिक विषय होइन।
समस्या जुन कारणले उत्पन्न भएको छ। समस्याका ती कारणका निराकरण नगरिकन समस्या बारबार आइरहन्छ। नेपालमा के कारणले जनयुद्ध भएको थियो। त्यसले राज्य सत्तालाई प्रभाव पारेको छ? राज्य सत्ताको रुपान्तरणको कुरा छोड्दिनुस्। केही अनुहार मात्रै फेरिएका छन्।
त्यसकारण त्यो राज्यसत्ताका बारेमा विचार नगरुन्जेल बाढी बारम्बार आँउछ। यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा छ। यति लामो लामो अनुपस्थिति प्रधानमन्त्रीको नहुनुको जिम्मेवारी मुख्यतः सभामुखकै रहन्छ।
(प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरि )
सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगको म्याद ६ महिना थपियो